उच्च प्रतिफल हुने सुरक्षित लगानीमा जोड दिएका छौं
रमेन्द्र रायमाझी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड
एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फन्डअन्तर्गत दोस्रो योजना ‘एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड फन्ड’को इकाइ निष्कासन तथा विक्री भदौ ५ गतेसम्मका लागि खुला गरेको छ । प्रतिइकाइ मूल्य रू. १० को दरले १२ करोड ५० लाख इकाइमध्ये १० करोड ६२ लाख ५० हजार इकाइ सर्वसाधारण तथा संघसंस्थाले खरीद गर्न सक्छन् । साउन ८ देखि विक्री खुला भएको यो योजनामा मागअनुसार आवेदन परेमा भदौ ५ गतेअगावै विक्री बन्द हुनेछ । प्रस्तुत छ, उक्त ब्यालेन्स्ड फन्ड र यसको व्यवस्थापनबाट लगानीकर्ताले कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्ने विषयमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेन्द्र रायमाझीसँग आर्थिक अभियानकी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार :
एनआईसी एशिया क्यापिटलले हाल ‘बचतमात्र होइन, लगानी गरौं’ भन्ने नारासहित एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्डमा न्यूनतम रू. १ हजारदेखि अधिकतम १७ करोड ५० लाखसम्म लगानी गर्न सकिने अवसर सर्वसाधारणलाई जुटाइदिएको छ । यसको मुख्य विशेषता के हो ?
लामो समयदेखि पूँजी बजार निरन्तर घटेर तल्लो विन्दुमा आइसकेको हाम्रो बुझाइ छ । यो अवस्थामा हामीले ब्यालेन्स्ड फन्डको अवधारणा ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य इक्विटी मार्केट तथा इन्ट्रेस्ट मार्केट दुवैबाट उचित लाभ लिन सकियोस् भन्ने हो । यस फन्डको ७० प्रतिशतसम्म शेयर बजार तथा ३० प्रतिशत निश्चित आम्दानी हुने बैंक मुद्दती, डिबेन्चर आदिमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा शेयर बजार तथा निरन्तर आम्दानी हुने क्षेत्रमा सन्तुलित भई जुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, सोही क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिन्छ । त्यसो हुँदा लगानीकर्ताले हरेक वर्ष उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैले ‘बचत मात्र होइन लगानी गरौं’ भन्ने नाराका साथ यो ब्यालेन्स्ड फन्ड ल्याएका हौं ।
म्युचुअल फन्डभन्दा ब्यालेन्स्ड फन्डमा के फरक छ ? लगानीकर्ताबाट उठाएको इकाइको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
जारी गरेको ब्यालेन्स्ड फन्डमा ७० प्रतिशत लगानी शेयर बजारमा गर्छौं र ३० प्रतिशत निश्चित आय हुने मुद्दती तथा ऋणपत्रमा (इन्ट्रेस्ट मार्केट)मा गर्छौं । मुख्यतया नेपालको सन्दर्भमा रियल सेक्टर, इन्ट्रेस्ट मार्केट र शेयर मार्केट गरी तीनओटा लगानीका क्षेत्र छन् । रियल सेक्टरमा लगानी गर्न हामीलाई प्रतिबन्ध छ । हामी त्यसमा जान सक्दैनौं । यसबाहेक शेयर र इन्ट्रेस्ट मार्केटमा लगानी गर्न पाउँछौं । हाम्रो ब्यालेन्स्ड फन्डले बजारको अवस्था हेरेर जुन क्षेत्रमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ, त्यसैमा लगानी गर्छौं । बजारको स्थिति हेरेर घाटा नपर्ने गरी सन्तुलन कायम गर्दै लगानी गर्छौं, जसअनुसार शेयर बजार घट्ने सम्भावना भएको बेलामा लगानी सूनिश्चित गर्न इन्ट्रेस्ट मार्केटमा लगानी बढाउँछौं भने शेयर मार्केट बढ्ने सम्भावना भएमा शेयरमा लगानी बढाउँछौं । यसरी ब्यालेन्समा रहेर लगानी गर्दा जोखिम समेत कम हुन्छ ।
आम लगानीकर्ता यसबारे कत्तिको जानकार छन् त ?
म्युचुअल फन्डपछि ब्यालेन्स फन्ड आउँछ । प्रायःको धारणा डिबेन्चर र म्युचुअल फन्ड भनेको एउटै भन्ने गलत बुझाइ पनि पाइन्छ । थोरैमात्र यसबारे जानकार छन् । यो एउटा सामूहिक कोष योजना हो । कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरीदविक्री गर्दा यसमा विशेषज्ञको समूहले विश्लेषण गरेर समयअनुसार प्रतिफल दिने कम्पनी छनोट गरिन्छ । र, त्यसमा मात्र कारोबारको निर्णय गरिन्छ । फन्डले गर्ने लगानीमा विविधता हुनुका साथै व्यावसायिक दृष्टिले काम गरिन्छ । हाल म्युचुअल फन्डले गरेको लगानीबाट प्राप्त गरेको प्रतिफलमा कर छूटको व्यवस्था छ ।
लगानीकर्ताले यसबाट कसरी लाभ लिन सक्छन् ?
लगानीकर्ता प्रत्यक्ष शेयर बजारमा छिर्दा धेरै लगानीको आवश्यकता पर्छ । शेयर बजार आफैमा जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो, जहाँ लगानी गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । सानो–सानो लगानी पनि गर्न सकिने भएकाले धेरै पैसा नहुने, बजारको ज्ञान नहुने, पैसा र ज्ञान दुवै भएका, तर समय नहुने व्यक्तिले यो ब्यालेन्स्ड फन्डमा लगानी गरी उचित लाभ लिन सक्छन् । मेरो विचारमा बचतमा रहेको केही रकम यसमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय हो, जहाँ बचतबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफलभन्दा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल निकै बढी हुने सम्भावना छ ।
लगानीकर्ताले यसमा कसरी आवेदन दिने ?
ब्यालेन्स्ड फन्डमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सी–आस्बामा आबद्ध भएको जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालय तथा मेरो शेयर प्रयोगकर्ताले अनलाइनमार्फत पनि आवेदन दिन सक्छन् । यो फन्डबारे थप विवरण जान्न चाहेमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, एनआईसी एशिया बैंक र धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमार्फत विवरण पुस्तिका हेर्न सकिन्छ । साथै मेरो शेयर प्रयोगकर्ताले सोही प्रणालीमार्फत डाउनलोड गरेर पढ्न सक्छन् ।
लगानीकर्तालाई यस्ता फन्डबाट कत्तिको जोखिम हुन सक्छ ?
म्युचुअल फन्ड आफैमा विविधतायुक्त पोर्टफोलियो भएको तथा विज्ञहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छ । यसले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दा उक्त कम्पनीको विगत, वर्तमान तथा भविष्यको समेत अध्ययन गरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय लिने हुँदा जोखिम कम हुन्छ । साथै बजारमा रहेका विभिन्न कम्पनी÷क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा लगानी गरिने भएकाले कुनै एक कम्पनी÷क्षेत्रमा उतारचढाव आउँदा समग्र लगानीमा खासै ठूलो असर पर्दैन । यसकारण स्वतः जोखिमको न्यूनीकरण हुन्छ ।
कुनै लगानीकर्ताले शेयरबजारमा कुनै एउटा कम्पनीको शेयरमात्र खरीद गर्दा त्यो कम्पनीको शेयरमूल्य घट्यो भने पूरै लगानी जोखिममा पर्न सक्छ । तर म्युचुअल फन्डले गरेको लगानीमा विविधता हुने भएकाले सर्वसाधारणले यसमा गरेको लगानीको जोखिम न्यून हुन्छ । किनकि म्युचुअल फन्डमार्फत लगानी गर्दा विज्ञको समूहले बजारको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण गरेर जोखिम कम हुनेगरी उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने कम्पनी÷क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । यसका लागि हामीसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अनुभवी विज्ञहरू हुन्छन् ।
दोस्रो बजारमा सामूहिक लगानी कोषको कारोबारको चहलपहल कत्तिको छ त ?
धेरैमा म्युचुअल फन्डसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी रहेको पाइँदैन । हाल शेयर बजार निरन्तर घटेकाले पनि लगानीकर्तामा म्युचुअल फन्डप्रति नकारात्मक धारणा रहेको हुन सक्छ । वास्तवमा सबै म्युचुअल फन्डको बजार मूल्य एनएभीभन्दा कममै कारोबार भइरहेको छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा समेत म्युचुअल फन्डहरूको इकाइको कारोबार बढ्दै गएको पाइन्छ । पछिल्लो समय गतवर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने अधिकांश म्युचुअल फन्ड नै छन् ।
यसअघिको अनुभव हेर्दा लगानीकर्ताले कत्तिको प्रतिफल पाएका छन् त ?
हाल यो कम्पनीले एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फन्डअन्तर्गत पहिलो योजना एनआईसी एशिया ग्रोथ फन्ड सञ्चालन गरिरहेको छ । नेप्से परिसूचक १,४५० को हाराहारीमा हुँदा हामी बजारमा प्रवेश गरेका थियौं र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेप्से परिसूचक १,२६० को हाराहारीमा भन्द भएको थियो । घट्दो मार्केटमा पनि हामी राम्रो प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएका छौं । उक्त फन्ड सञ्चालनको पहिलो वर्षमै ११ दशमलव १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने क्षमता भए पनि १० प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरिसकेका छौं । छिट्टै शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द हुने मिति तय गरी उक्त प्रस्तावित लाभांश वितरण गर्नेछौं ।
एनआईसी क्यापिटलले ६ ओटा कम्पनी (आरम्भ लघुवित्त, एनआईसी एशिया बैंक, सहयोगी विकास बैंक, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत)को शेयर रजिस्ट्रार भएर काम गरेको छ । पछिल्लो समय विशेष कस्ता परामर्शमा जोड दिइयो ?
हामीले गुणस्तरीय र समयसापेक्ष मर्चेन्ट बैंकिङ सम्बन्धी सेवाका साथै म्युचुअल फन्ड, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र परामर्श (कर्पोरेट एड्भाइजरी) जस्ता काममा विशेष जोड दिएका छौं ।
तपाईंहरूको कार्यक्षेत्रमा परेको मर्चेन्ट बैंकिङ, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, कर्पोरेट एड्भाइजरी, डिपोजिटरी (निक्षेप सदस्य) पार्टनरशिप सर्भिस छन् । यसबीच यस्ता कामको अनुभव कस्तो रह्यो ?
अघिल्लो आवमा हामी विशेषगरी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवामा केन्द्रित रह्यौं । समग्रमा हाम्रा लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष उत्साहजनक रह्यो । हाम्रो मुख्य फोकस पीएमएस र म्युचुअल फन्ड थियो । पीएमएसमा राम्रो फड्को मारेका छौं । आगामी दिनमा पीएमएसलाई नयाँ सोच र नवीन प्रडक्टका साथ नयाँ उचाइमा लैजाने लक्ष्य लिएका छौं । साथै हाल संस्थागत परामर्श र खुलामुखी सामूहिक लागनी कोष योजना सञ्चालनमा ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
हितग्राही खाता (डिम्याट एकाउन्ट) वालालाई के कस्ता सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
हाल १ लाख ७० हजार ग्राहकलाई डिम्याट सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं । त्यस्तै एनआईसी एशिया बैंकको देशभरका कुनै पनि शाखाबाट डिम्याट खाता खोल्न, शेयरको अभौतिकीकरण गर्ने जस्ता निक्षेप सदस्यको रूपमा प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा दिएका छौं । ग्राहकले गरेको शेयर कारोबारको नोटिफिकेशन (डेबिट/क्रेडिट) एसएमएसबाट निःशुल्क पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
९ महीनामा ४९ ओटा लघुवित्तको नाफा ३ अर्ब ८५ करोडभन्दा बढी